Ngakho-ke, namhlanje sizoxoxa nawe mayelana nokuthi ungabuka kanjani izivakashi ku "Uthintana" . Lena umsebenzi owusizo futhi othakazelisayo, ikakhulu uma wazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani. Kunezindlela ezimbalwa ezingakusiza ukuthi usebenzise lolu hlelo.
Sizoqala ngokuzama ukuqagela ukuthi kungani sidinga umsebenzi esizofunda ukuwasebenzisa namhlanje. Uma ucabanga ukuthi ungabuka kanjani izivakashi ku- "Ukuthintana", cishe, kwaba mnandi ukuthi ubone izivakashi ekhasini lakho.
Eqinisweni, lesi sici sisiza ekuboneni izivakashi ezifiselekayo nezingathandeki, kanye nokukhawulela ukufinyelela kwabanye abasebenzisi. Ngakho, lena yithuba eliwusizo kakhulu. Noma kunjalo, ngezinye izikhathi kungabhekwa njengento engenamsebenzi. Ake sizame ukuqonda nawe ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuthi ubuke kanjani izivakashi "Othintana nabo" futhi, ngokujwayelekile, ngabe kukhona ithuba kubo bonke abasebenzisi.
Ngokwemvelo, uma sizibuze umbuzo, sinomsebenzi ocatshangelwayo. Indlela yokuqala, ongathola ngayo ukuthi ubani owayebuka ikhasi lethu - yilona hlelo "Abavakashi" "Oxhumana". "" Kulula ukulanda, ukufaka nokusebenzisa. Faka ukungena ngemvume nephasiwedi yakho, bese upheqa izivakashi zakho.
Kodwa kubalulekile ukukhathazeka ngokuqapha okuhlukile kwesicelo esinikeziwe. Into yukuthi le ndlela ayikwazi ukubizwa ngokuthi iphephile ngokuphelele. Izinhlelo ezehlukene ezandisa imisebenzi yokuxhumana nomphakathi, iningi labo liyi-virus futhi likwazi ukushaya i-akhawunti yakho. Ngakho-ke, uma ucabanga ukuthi ungabuka kanjani izivakashi ku "Uthintana", futhi izinsongo zokuphepha azikho okubi kuwe - ungasebenzisa le ndlela. Futhi kuze kube manje sizoqhubeka nezindlela eziningi zokuphambana ezingasisiza.
Indlela yokuqala esingayisebenzisa (phakathi kokuphephile), yiqiniso, isicelo esikhethekile senethiwekhi yokuxhumana. Labizwa ngokuthi "Izivakashi nabamthandayo" ku "Uthintana".
Ukuze ubone ukuthi ubani ovakashele iphrofayela yakho, mane ukhombe ikheli lesicelo ozifakile ukuze izivakashi zakho zidlule kulokhu kuxhumana. Kuphela kuleli cala ungabona izivakashi zekhasi.
Isibonelo, ungafaka isixhumanisi sibe umbhalo bese ushicilela. Noma nje ubhale kule "ikheli lewebhu". Ngemuva kokuthi unesithakazelo kumsebenzisi futhi umenze "angene", uzoba nethuba elihle lokubuka bonke abasebenzisi abavakashele iphrofayela yakho. Nokho, lezi akuzona zonke izindlela ongazisebenzisa. Ake sizame ukuthola ukuthi yini enye engasisiza emqondweni wethu.
Uma ucabanga ukuthi ungabuka kanjani izivakashi ku "Uthintana", ke-ke, abasebenzisi abaningi bangakuleka ukuba uthole izindawo okuthiwa ezikhethekile ezihlinzeka ngamasevisi ukuhlinzeka uhlu lwabasebenzisi.
Ngokuvamile, abaningi banesithakazelo kulokhu. Ucelwa ukuba unikeze ukungena kwakho, ngezinye izikhathi iphasiwedi, kanye nemali yenkonzo. Ngemuva kokuthi wenze lokhu, uzothenjiswa ukunikeza izinhlu zezivakashi zephrofayela. Isibonelo, kuzothunyelwa kuwe nge-imeyili ngezinye izikhathi.
Ungathokozi futhi ucabange ukuthi yilokho oyokwazi ukusebenzisa leyo nsizakalo, njengoba ibhekwa "izivakashi" ezihambelanayo. Ngokuvamile, izenzo ezinjalo zingalinganiswa nezinhlelo ze-cracker. Uvele unike imali kulabo abahlukumezayo, kodwa ngeke bakuthande. Ngaphezu kwalokho, ungamane uhlehle futhi usheshe i-akhawunti yakho. Vumelana, hhayi umphumela omuhle kakhulu. Noma kunjalo, abasebenzisi abaningi basaphila kulesi sikhalazo. Ikakhulukazi uma isifiso sokufunda izivakashi siphakeme kakhulu.
Ngempela akunakwenzeka ukusebenzisa ezinye izindlela zendawo yonke ezihlinzekwa yi-social network "Vkontakte"? Eqinisweni, ukuphathwa kwendawo akuvumeli abasebenzisi bayo ukuba babheke amaphrofayela walabo abavakashele ikhasi.
Kunalokho, wonke umuntu unethuba elihle lokubona ezinye izibalo ezisebenza kuzivakashi nezivakashi. Lapho uzocelwa ukubheka iminyaka yezilaleli ezazibuke iphrofayli, ubulili kanye nezwe. Ngaphezu kwalokho, umsebenzisi ngamunye angabona futhi inombolo yokubukwa kwe-akhawunti yakhe. Kuyinto enhle kakhulu. Manje sizofunda ukuthi singayisebenzisa kanjani nawe.
Iya kuphrofayela yakho, bese ubheka ukubhaliswa ngaphansi kokurekhodwa komsindo. Umzila "Izibalo" uzoboniswa lapho. Chofoza kuso, bese ubona ukuthi ungenzani. Ngaphambi kokuthi uphume iwindi elizokusiza ukuba ubone ukuthi ngubani obuka ikhasi lakho. Lapha uzobona ukuthi bangaki amadoda nabesifazane abavakashela ikhasi lakho, kanye nezibalo ezinsukwini zokuvakasha. Kukhona isimiso esihlukile salokhu. Njengoba ubona, akukho okuyinkimbinkimbi.
Indlela yokwenza "I-Telegram" ngaphandle kwamakhono okuhlela? Amathiphu kubasebenzisi "I-Telegram"
I-Chinese Crossfire: ukubhalisa nezici
Isimo esinamandla kulabo abakhathele ukuthula
Ungangena kanjani ku- "Odnoklassniki": ngaphandle kokubhalisa noma uma unemibuzo yemibuzo
Idlalwa kanjani ngoHamachi nabangani?